Paracetamol ပါရာစီတမော လူပြောများလာပြီ – Sannla
ပုံပါပို့စ်တခုကို မနှစ်ကတွေ့ခဲ့တယ်။ ပုံထဲကလိုကောက်ချက်မျိုး လွယ်လွယ်နဲ့မချသင့်ပါ။
Acetaminophen ကို Paracetamol ပါရာစီတမောလို့ ခေါ်တယ်။ ၁၈၉ဝ ကတည်းကပေါ်ခဲ့ပြီး ဈေးကွက်ထဲကို ၁၉၅ဝ ကျော်မှာရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ အနာအကိုက်ကို သက်သာစေသလဲည်းဆိုတာ မသိခဲ့ကြသေးဘူး။ အခုတော့ သုတေသနကနေ ဘယ်လိုဘယ်ပုံအလုပ်ဖြစ်စေတာကိုသိလာပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့ဆေးကျောင်းသားဘဝ ၁၉၇ဝ ဝန်းကျင်၊ ဆေးဝါးဗေဒစာအုပ်ထဲမှာ ပါရာစီတမောဆေးဟာ မထင်မရှားသာ ပါခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ အသုံးအလွန်များလာတယ်။ ကလေးတွေဆိုရင် မရှိသုံးဆေးတမယ် ဖြစ်လာတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ သတိပေးချက်တွေများလာတယ်။ များတယ်ဆိုတာနဲ့ မသုံးနဲ့လို့ပြောတာတော့ မဟုတ်ပါ။ ဆေးပညာကို လူမှုရေးကွန်ရက်တွေမှာနဲ့ မီဒီယာမှာ အလွန်အကျွံရေးတာ မဖြစ်သင့်ပါ။ လူတွေဟာ တယောက်နဲ့ တယောက်မတူပါ။ တယောက်တည်းမှာလည်း တချိန်နဲ့တချိန် မတူပါ။ ဥပမာ အသည်းရောဂါမရှိခင်က ပါရာစီတမောကို ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့သုံးတာ အကျိုးများပါတယ်။
ပါရာစီတမောကိုအများကြီးသောက်ရင် အသက်ကိုပင် ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ ၂၃-၁၁-၂ဝ၁၁ နေ့ လန်ဒန်ကလာတဲ့ သတင်းတပုဒ်ကဆိုပါတယ်။ အအေးမိတာ၊ တုပ်ကွေးဖြစ်တာ၊ ကိုက်တာ-ခဲတာတွေအတွက် သုံးနေတဲ့ ပါရာစီတမော တခုတည်းဖြစ်ဖြစ် ပူးတွဲထားတဲ့ ဆေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် များများသောက်ရင် အန္တရာယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ သေနိုင်တာက အသည်းအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့လို့ ဖြစ်တယ်။ မတော်တဆ ဆေးများများ သောက်မိရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေရာကျပါလိမ့်မယ်။
အီဒင်ဘတ်က သုတေသနလုပ်သူတွေတွေ့ရှိတာက 500mg ဆေးပြား၊ ၈ ပြား၊ တနည်းအားဖြင့် 4gm ဟာ တနေ့မှာ အများဆုံးဖြစ်သင့်တယ်လို့ဆိုတယ်။ (ကက်နက်-ဆင်မ်ဆန်) ခေါင်းဆောင်ပြီး လူနာပေါင်း ၆၆၃ ယောက်ကို ၁၉၉၂ ခုနှစ် ကတည်းကနေ ၂ဝဝ၈ အထိလေ့လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဒီလူနာတွေဟာ ပါရာစီတမောကြောင့် အသည်းထိခိုက်ခဲ့ရသူတွေပါ။
တွေ့ရှိချက်အရပျမ်းမျှ အသက် ၄ဝ နှစ်ရှိသူ ၁၆၁ ယောက်မှာခေါင်းကိုက်၊ သွားကိုက်၊ ခါးနာ၊ ဗိုက်နာတာတွေကြောင့် ပါရာစီတမောဆေးကိုလိုတာထက် ပိုသောက်ခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ထဲက ၅ ယောက်မှာ ၂ ယောက်က အသည်း အလုပ် မလုပ်နိုင်တော့ဘဲ သေဆုံးခဲ့ကြတယ်။ ဒါဟာ ဗြိတိသျှဆေးဝါးဗေဒမှတ်တမ်းအရ ဆေးအလွန်အကျွံပိုကဲမှုကြောင့် သေဆုံးရတဲ့နှုန်းထက် မြင့်မားတာဖြစ်တယ်။ အဲလိုဆေးအလွန်အကျွံ ပိုလွန်သောက်မိတာဟာ လူနာက နာတာမသက်သာလို့ ဆေးထပ်သောက်ရာကနေ သောက်သင့်တဲ့ ဆေးအဆကိုမေ့လျှော့ ကျော်လွန်သွားတြာဖြစ်တယ်လို့ (ဆင်ပဆင်) က ဆိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆေးဘယ်လောက် သောက်ပြီးပြီလဲဆိုတာ မှတ်တမ်းထားသင့်ကြတယ်။
ဆေးကိုစိတ်ချရတဲ့အဆသောက်ရင် ကိုယ်ခန္ဓာကကောင်းကောင်းကျေချက် လက်ခံနိုင်ပေမဲ့ လွန်ကဲပြီးသောက်မိရင် မကျေချက်နိုင်တာတွေ စုဝေးပြီးအသည်းကိုထိခိုက်ရာကနေ ပြန်မကောင်းနိုင်တဲ့အထိရောက်စေနိုင်တယ်။
၂၃-၁၁-၂ဝ၁၁ နေ့ကဘဲနောက်သတင်းတခုကတော့ ပါရာစီတမောဆေးရဲ့ လှို့ဝှက်ချက်ကိုသိလာပြီ။ ဒါကို အသုံးချပြီးစိတ်ချရတဲ့ အနာ-အကိုက်ပျောက်ဆေးကိုဖေါ်စပ်နိုင်မယ်လို့ လန်ဒန်၊ ဘုရင့်-ကောလိပ် သုတေသန လုပ်သူတွေက ဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဆေးသုတေသနကို ဆွီဒင် လန်းဒ်တက္ကသိုလ်နဲ့တွဲလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ အာရုံကြောဆဲလ်တွေရဲ့အဖုံးမှာရှိတဲ့ TRPA1 ဆိုတဲ့ ပရိုတင်း မော်လီကျူးကြောင့် ပါရာစီတမောထိရောက်စေတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီတွေ့ရှိချက်ဟာ လှို့ဝှက်ချက်ရဲ့ သော့ချက်ကိုတွေ့လာတာပါလို့ ဝုလ်ဖ် အသက်နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ရောဂါဌာနက ဒေါက်တာ ဒေးဗစ် အန်ဒါဆန်က ပြောလိုက်တယ်။ အခုလိုအနာသက်သာစေတဲ့ မော်လီကျူးကိုအာရုံစိုက်ပြီး၊ ပိုပြီးစိတ်ချရမဲ့ဆေးမျိုး၊ ဆေးများသွားလို့လဲမသေစေမှာမျိုးကိုရှာဘို့ဖြစ်လာပြီလို့ ဆက်ပြောပါတယ်။
– လူကြီး = 325 to 650 mg ၄ နာရီတကြိမ်။ 500 mg ၈ နာရီတကြိမ်။ တနေ့မှာ4grams ထက်မများစေရ။
– အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၈ နှစ် = 40-60 mg/kg/day ၆ နာရီတကြိမ်။ တနေ့မှာ 3.75 g/day ထက်မများစေရ။
– အသက် ၁၂ နှစ်အောက် 10-15 mg/kg ၆-၈ နာရီတကြိမ်။ တနေ့မှာ 2.6 g/day ထက်မပိုစေရ။
ပါရာစီတမောကို ဆေးကုမ္ပဏီတွေပေးတဲ့ နာမည်တွေက (အေ-တူ-ဇက်) ရှိပါတယ်။
3. Paracetamol (ပါရာစီတမော) လူပြောများလာပြီ
Paracetamol ပါရာစီတမော လူပွောမြားလာပွီ
ပုံပါပို့ဈတခုကို မနှဈကတှခေဲ့တယျ။ ပုံထဲကလိုကောကျခကျြမြိုး လှယျလှယျနဲ့မခသြငျ့ပါ။
Acetaminophen ကို Paracetamol ပါရာစီတမောလို့ ချေါတယျ။ ၁၈၉ဝ ကတညျးကပျေါခဲ့ပွီး ဈေးကှကျထဲကို ၁၉၅ဝ ကြျောမှာရောကျလာခဲ့ပမေဲ့ ဘယျလိုနညျးနဲ့ အနာအကိုကျကို သကျသာစသေလဲညျးဆိုတာ မသိခဲ့ကွသေးဘူး။ အခုတော့ သုတသေနကနေ ဘယျလိုဘယျပုံအလုပျဖွဈစတောကိုသိလာပါပွီ။
ကြှနျတျောတို့ဆေးကြောငျးသားဘဝ ၁၉၇ဝ ဝနျးကငျြ၊ ဆေးဝါးဗဒေစာအုပျထဲမှာ ပါရာစီတမောဆေးဟာ မထငျမရှားသာ ပါခဲ့ပါတယျ။ နောကျတော့ အသုံးအလှနျမြားလာတယျ။ ကလေးတှဆေိုရငျ မရှိသုံးဆေးတမယျ ဖွဈလာတယျ။ အခုနောကျပိုငျးမှာတော့ သတိပေးခကျြတှမြေားလာတယျ။ မြားတယျဆိုတာနဲ့ မသုံးနဲ့လို့ပွောတာတော့ မဟုတျပါ။ ဆေးပညာကို လူမှုရေးကှနျရကျတှမှောနဲ့ မီဒီယာမှာ အလှနျအကြှံရေးတာ မဖွဈသငျ့ပါ။ လူတှဟော တယောကျနဲ့ တယောကျမတူပါ။ တယောကျတညျးမှာလညျး တခြိနျနဲ့တခြိနျ မတူပါ။ ဥပမာ အသညျးရောဂါမရှိခငျက ပါရာစီတမောကို ကိုယျအလေးခြိနျနဲ့သုံးတာ အကြိုးမြားပါတယျ။
ပါရာစီတမောကိုအမြားကွီးသောကျရငျ အသကျကိုပငျ ထိခိုကျနိုငျတယျလို့ ၂၃-၁၁-၂ဝ၁၁ နေ့ လနျဒနျကလာတဲ့ သတငျးတပုဒျကဆိုပါတယျ။ အအေးမိတာ၊ တုပျကှေးဖွဈတာ၊ ကိုကျတာ-ခဲတာတှအေတှကျ သုံးနတေဲ့ ပါရာစီတမော တခုတညျးဖွဈဖွဈ ပူးတှဲထားတဲ့ ဆေးတှပေဲဖွဈဖွဈ မြားမြားသောကျရငျ အန်တရာယျပေးနိုငျတယျလို့ ဆိုလိုတာပါ။ သနေိုငျတာက အသညျးအလုပျမလုပျနိုငျတော့လို့ ဖွဈတယျ။ မတျောတဆ ဆေးမြားမြား သောကျမိရငျ ကိုယျ့ကိုယျကို သတျသရောကပြါလိမျ့မယျ။
အီဒငျဘတျက သုတသေနလုပျသူတှတှေရှေိ့တာက 500mg ဆေးပွား၊ ၈ ပွား၊ တနညျးအားဖွငျ့ 4gm ဟာ တနမှေ့ာ အမြားဆုံးဖွဈသငျ့တယျလို့ဆိုတယျ။ (ကကျနကျ-ဆငျမျဆနျ) ခေါငျးဆောငျပွီး လူနာပေါငျး ၆၆၃ ယောကျကို ၁၉၉၂ ခုနှဈ ကတညျးကနေ ၂ဝဝ၈ အထိလလေ့ာခဲ့တာဖွဈတယျ။ ဒီလူနာတှဟော ပါရာစီတမောကွောငျ့ အသညျးထိခိုကျခဲ့ရသူတှပေါ။
တှရှေိ့ခကျြအရပမျြးမြှ အသကျ ၄ဝ နှဈရှိသူ ၁၆၁ ယောကျမှာခေါငျးကိုကျ၊ သှားကိုကျ၊ ခါးနာ၊ ဗိုကျနာတာတှကွေောငျ့ ပါရာစီတမောဆေးကိုလိုတာထကျ ပိုသောကျခဲ့ကွတယျ။ သူတို့ထဲက ၅ ယောကျမှာ ၂ ယောကျက အသညျး အလုပျ မလုပျနိုငျတော့ဘဲ သဆေုံးခဲ့ကွတယျ။ ဒါဟာ ဗွိတိသြှဆေးဝါးဗဒေမှတျတမျးအရ ဆေးအလှနျအကြှံပိုကဲမှုကွောငျ့ သဆေုံးရတဲ့နှုနျးထကျ မွငျ့မားတာဖွဈတယျ။ အဲလိုဆေးအလှနျအကြှံ ပိုလှနျသောကျမိတာဟာ လူနာက နာတာမသကျသာလို့ ဆေးထပျသောကျရာကနေ သောကျသငျ့တဲ့ ဆေးအဆကိုမလြေှ့ော့ ကြျောလှနျသှားတွာဖွဈတယျလို့ (ဆငျပဆငျ) က ဆိုပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဆေးဘယျလောကျ သောကျပွီးပွီလဲဆိုတာ မှတျတမျးထားသငျ့ကွတယျ။
ဆေးကိုစိတျခရြတဲ့အဆသောကျရငျ ကိုယျခန်ဓာကကောငျးကောငျးကခြေကျြ လကျခံနိုငျပမေဲ့ လှနျကဲပွီးသောကျမိရငျ မကခြေကျြနိုငျတာတှေ စုဝေးပွီးအသညျးကိုထိခိုကျရာကနေ ပွနျမကောငျးနိုငျတဲ့အထိရောကျစနေိုငျတယျ။
၂၃-၁၁-၂ဝ၁၁ နကေ့ဘဲနောကျသတငျးတခုကတော့ ပါရာစီတမောဆေးရဲ့ လှို့ဝှကျခကျြကိုသိလာပွီ။ ဒါကို အသုံးခပြွီးစိတျခရြတဲ့ အနာ-အကိုကျပြောကျဆေးကိုဖျေါစပျနိုငျမယျလို့ လနျဒနျ၊ ဘုရငျ့-ကောလိပျ သုတသေန လုပျသူတှကေ ဆိုလိုကျပါတယျ။
ဆေးသုတသေနကို ဆှီဒငျ လနျးဒျတက်ကသိုလျနဲ့တှဲလုပျခဲ့တာ ဖွဈတယျ။ အာရုံကွောဆဲလျတှရေဲ့အဖုံးမှာရှိတဲ့ TRPA1 ဆိုတဲ့ ပရိုတငျး မျောလီကြူးကွောငျ့ ပါရာစီတမောထိရောကျစတော ဖွဈတယျ။ ဒီတှရှေိ့ခကျြဟာ လှို့ဝှကျခကျြရဲ့ သော့ခကျြကိုတှလေ့ာတာပါလို့ ဝုလျဖျ အသကျနဲ့ဆကျစပျတဲ့ရောဂါဌာနက ဒေါကျတာ ဒေးဗဈ အနျဒါဆနျက ပွောလိုကျတယျ။ အခုလိုအနာသကျသာစတေဲ့ မျောလီကြူးကိုအာရုံစိုကျပွီး၊ ပိုပွီးစိတျခရြမဲ့ဆေးမြိုး၊ ဆေးမြားသှားလို့လဲမသစေမှောမြိုးကိုရှာဘို့ဖွဈလာပွီလို့ ဆကျပွောပါတယျ။
– လူကွီး = 325 to 650 mg ၄ နာရီတကွိမျ။ 500 mg ၈ နာရီတကွိမျ။ တနမှေ့ာ4grams ထကျမမြားစရေ။
– အသကျ ၁၂ နှဈမှ ၁၈ နှဈ = 40-60 mg/kg/day ၆ နာရီတကွိမျ။ တနမှေ့ာ 3.75 g/day ထကျမမြားစရေ။
– အသကျ ၁၂ နှဈအောကျ 10-15 mg/kg ၆-၈ နာရီတကွိမျ။ တနမှေ့ာ 2.6 g/day ထကျမပိုစရေ။
ပါရာစီတမောကို ဆေးကုမ်ပဏီတှပေေးတဲ့ နာမညျတှကေ (အေ-တူ-ဇကျ) ရှိပါတယျ။
Acamol, Ace +, Acetalgin, Adol, Aldolor, Alvedon, APAP, Apiretal, ApiretalFlas, Atamel, Atasol, Benuron, Biogesic (Myanmar), Buscapina, Calpol, Cemol, Crocin, Dafalgan, Daleron, Dawaya magi, Depon, Dexamol,Dexamol Plus, Dolex, Dolo, Dolgesic, Doliprane, Dolprone, Duiyixian, Efferalgan, Europain, Febrectal, Febrex Plus, Febricet, Febridol, Gelocatil, Gripin, Hedanol, Herron, Influbene, Kafa, Lekadol, Lupocet, Metacin, Mexalen, Milidon, Minoset, Momentum, Napa, Neo-Kiddielets, Pacimol, Pacol, Pamol, Panol, Panado, Panadol, Panamax, Panodil, Para, Paracet, Paracitol, Paralen, Paramed, Paramol, Parol, Perdolan, Perfalgan, Pinex, PyongSuCetamol, Pyrenol (Paracetamol + caffeine), Plicet, Reliv, Rokamol, Sara, Scanol, Tachipirin, Tachipirina, Tafirol, Tapsin, Termalgin, Tempra, Treuphadol, Triaminic, Tylenol, Thomapyrin, Uphamol, Vermidon, Vitamol, Xumadol, Zolben စသညျ။
1. Paracetamol no good for back pain ပါရာစီတမော ခါးနာကို မသကျသာ
2. Paracetamol (ပါရာစီတမော)
3. Paracetamol (ပါရာစီတမော) လူပွောမြားလာပွီ
4. Paracetamol combo drugs (ပါရာစီတမော) ပူးတှဲဆေး သတိပေးခကျြ
5. Paracetamol Syrup (ပါရာစီတမော) အရညျ
6. Paracetamol with Pepsi (ပါရာစီတမော) နဲ့ (ပကျစီ)
7. Pregnancy and Paracetamol (ပါရာစီတမော) နဲ့ ကိုယျဝနျ
8. Toxic paracetamol ပါရာစီတမော အဆိပျဆေးရညျ